Content Delivery Network (CDN) ကိုအသုံးပြုခြင်း။ | Web Design Development, Domain, Hosting Servers Services
Content Delivery Network (CDN) ကိုအသုံးပြုခြင်း။
CDNs ensure users download data from servers that are closest in geographical proximity. (images from : https://gtmetrix.com)
CDN ဆိုတာကတော့ အသုံးပြုသူ ရဲ့ တည်နေရာအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး CDN node လို့ခေါ်တဲ့ Edge Servers တွေကနေ ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေ CSS/JS ဖိုင် စသည်တို့ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း ယာယီ သိုလောင်ထား (Caching) ခြင်း, Optimize လုပ်ခြင်း စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – မိမိဖွင့်ကြည့်တဲ့ Web Site Server က US, Buffalo Datacenter ကဆိုကြပါစို့၊ အသုံးပြုသူက မြန်မာပြည်ကဆိုရင် အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Singapore ကနေဆွဲယူပါတယ်။ ဒါကြောင့် Website တစ်ခုကို ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ အချိန်တိုအတွင်း အလျှင်အမြန် ပေါ်လာစေပါတယ်။ Edge Server များများရှိရင် နေရာများများမှာ ဖြန့်ကျက်ထားသလို ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုကောင်းတာပေါ့။ Distributed data centers ပေါ့။
CDN က စောစောကပြောသလို Edge Server တွေကြောင့် data တွေသွားလာမူလျော့ချပေးရုံ (reduced latency) မကပါဘူး။ သူ့မှာ Optimization ဆိုင်ရာ ကောင်းကွက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
WithaCDN, users fromaEuropean point of origin will be able to download your site’s static content faster fromacloser server node. (images from : https://gtmetrix.com)
မိမိအသုံးပြုတဲ့ Browsers ဆိုတာ website တစ်ခုကိုဖွင့်တဲ့အခါ content တွေကို web server ဆီကို လှမ်းပြီး request လုပ်ပါတယ်။ ဒီလို request လုပ်တဲ့နေရာမှာ ခေါ်ဆိုမှုကို browser က limit လုပ်ထားပါတယ်။ တော်တော်မျာများကတော့ domain တစ်ခုကို concurrent connections ၄ ခု သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ၅ ခုမြောက်ဖိုင်က ခဏစောင့်ပေါ့။ ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ မတူညီတဲ့ လမ်းကြောင်း ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဥပမာ : World Wide Myanmar ဆိုရင် cdn contents တွေအတွက် https://www.worldwidemyanmar.com/images/logo.png ဖိုင်အစား https://cloudcdn.worldwidemyanmar.com/images/logo.png ဆိုပြီး အသုံးပြုပါတယ်။
ဖိုင်ကို ကြိုတင် သိုလှောင်ခြင်း (Pre-cached)
ဥပမာ – ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့။ ဒီဖိုင်ကို တစ်ခါ request လုပ်ပြီးတာနဲ့ မိမိရဲ့ browser မှာ offline သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ အကယ်၍ နောက်တစ်ခုကို ထပ်ဖွင့်တဲ့အချိန် site က jquery.min.js ကိုလိုလာပြီဆိုရင် စောစောက သိုလောက် cahed လုပ်ထားတဲ့ content ကို လမ်းဆွဲယူလိုက်တာပဲ။
Site ရဲ့ အသုံးပြုမှုကို အသေးစိတ်သိရှိနိုင်ခြင်းပါ။ ဥပမာ ဘယ်နိုင်ငံကနေဝင်ကြည့်ခဲ့သလဲ၊ ကြည့်နေသလဲဆိုတဲ့ (Live)၊ Cached Files, အသုံးပြု Bandwidth တွေက အစပေါ့။
လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းတွေ အလွယ်တစ်ကူလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ – Cloudflare ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံ၊ ဘယ် IP ကိုပိတ်မယ် ဖွင့်မယ်က အစပေါ့။ ထို့အတူ Security Profile ကို low, medium, high ဆိုပြီး အလွယ်တကူသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုသတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် မလိုတဲ့ bot access တွေတားမြစ်နိုင်သလို traffic အရန်မြင့်လာတဲ့အခါ human/bot confirmation တွေချပေးခြင်းတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် တစ်လကို 10 GB bandwidth ကုန်ကျရင် CDN ခံလိုက်တာနဲ့ ပျမ်းမျှ တစ်လကို 3GB လောက်ပဲ အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီအတွက် Bandwidth 65% လောက် သက်သာပါတယ်။
ဒီတော့ CDN ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Bandwidth သက်သာတယ်။ Speed ပိုမြန်လာပါမယ်။
နာမည်ကြီးတဲ့ CDN တွေကတော့
၁. Akamai – သူကတော့ CDN ထဲမှာ ဈေးအမြင့်ဆုံး၊ Edge Server အများဆုံး၊ အကောင်းဆုံးပေါ့… Facebook လို Company တောင် Akamai CDN ကိုသုံးပါတယ်။
၂. Cloudflare – Free အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Free Plan မှာတင် တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Access List Control တွေက အစပေါ့။ Pro Plan ကတော့ ဒေါ်လာ ၂၀ ရှိပါတယ်။ Cloudflare ရဲ့ Free SSL ပေးပါတယ်။
၃. Amazon Cloudfront – သုံးသလောက် Bandwidth ကျသလောက် ပေးရမှာပါ။ သူလည်းအတူတူပါပဲ။ ဈေးနှုန်းသက်သာပါတယ် ။ Free SSL ပေးပါတယ်။
၄. Keycdn – Trial အနေနဲ့ ၁၅ ရက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ အသုံးပြုရတာလွယ်ကူပါတယ်။ Free SSL (Let’sencrypt) ပေးပါတယ်။ Trial ပေးပြီးတာနဲ့ reload ပြန်လုပ်ရပါတယ်။ ပထမ payment ကို ၂၉ ဒေါ်လာထည့်ရပြီး ၂၉ Credits ရပါတယ်။ World Wide Myanmar လို business site ဆိုရင် တစ်လမှ ၂ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ကုန်ပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ interface ရှိပါတယ်။
၅. Maxcdn – Paid ထဲမှာတော့ နာမည်ကြီးပေါ့။
၆. Cdn77 – သူလည်း အပေါ်က အတိုင်းပါပဲ။ trial ပေးပါတယ်။ Free SSL (Let’sencrypt) ပေးပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့ interface ရှိပါတယ်။